Ciidamada Itoobiya oo sannadkan dhamaadkiisa ka bixi doona Soomaaliya | Somaliland.Org
November 29, 2008	Wasiirka Difaaca ee dalka Itoobiya ayaa warqad uu u qoray xoghayaha Qaramada Midoobay Ban Ki-moon, waxa uu u sheegay in ciidamadiisu ay ka bixi doonaan Soomaaliya. Af-hayeen u hadlay Wasiirka Difaaca Itoobiya ayaa yidhi “hawshii nalooga baahnaa waan gudanay hase yeeshee caalamku tiisii kamuu soo bixin” isaga oo u jeeda ciidamadii nabad-ilaalinta ee caalamka ay ka filayeen. “Waxaan uga bixi doonaa qaab aan aad uga baaraandegnay” ayuu ku daray.
Faragelinta ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya dabayaaqadii sannadkii 2006, ayaa horseedday xasuuq iyo dhimasho aan la soo koobi karin oo loo gaystay dadka maatida ah. Ujeeddada joogitaanka ciidamada Itoobiya ayaa ahayd in Soomaaliya ay ka dhalato dawlad taabacsan maamulka Itoobiya. Itoobiya waxay cabsi ka qabtay awoodda ururkii Maxkamada Islaamiga ahaa oo wakhtigaas ku socday inay qabsadaan Baydhaba oo ahayd fadhiisinka maamulkii Itaalka darnaa ee Cabdillaahi Yuusuf. Waxa kale oo cabsida Itoobiya ku jirtay in Maxaakiimta Islaamiga ah oo awood badani ay dhiirrigelintoonto jabhadaha ka soo horjeeda xukuumadda Itoobiya ee dalkaas ka dagaalama.
Waxa dhinaceeda werwer qabay xukuumadda Somaliland iyada oo wakhtiyadaas dalka aad looga dareemay dhaqdhaqaaq dad u dhashay Somaliland oo si badheedh ah u taageeray Maxkamadaha Islaamiga ah mararka qaarkoodna u ololaynayay in laga qaybqaato difaaca maamulka Maxaakiimta Islaamiga ah ee Soomaaliya.
Maamulka Cabdillaahi Yuusuf
Maamulka Cabdillaahi Yuusuf iyo taageereyaashiisa ayaa aad uga soo horjeeda tallaabada Itoobiya kaga baxayso Soomaaliya, inkasta oo maamulkiisu qirtay inaanuu gacanta ku haynin badiba koonfurta Soomaaliya marka laga reebo xaafado Muqdisho ka tirsan. Maamulkaas ayaa la rumaysanyahay inaanuu iskii isaga difaaci karin kooxaha ka soo horjeeda oo uu burbur ku dambayndoono haddii ciidamada Itoobiya ay ka baxaan Soomaaliya.
Waxa la filayaa in go’aankan Itoobiya ay kaga baxayso Soomaaliya uu ka dhashay isbeddelka xukuumadeed ee ka dhacay dalka Maraykanka oo dhowaan loo doortay musharax Barack Obama madaxweynaha Maraykanka. Obama wuxuu ka soo horjeedaa in Maraykanku horseedo ama qayb ka noqdo daggaallo ka hura qaybo kala duwan oo dunida ah waxana uu ballanqaaday in ciidadama Maraykanku ay ka bixi doonaan Ciraaq cuddudoodana ay saari doonaan meeshii laga soo weeraray isaga oo u jeeda Afgaanistaan. Waxa kale oo Obama ka soo horjeeday lacagka Maraykanka kaga baxda dagaalka Ciraaq oo bilwalba ku kacda 10 bilyan oo doollar. Sidaa awgeed rajaga Itoobiya ay kaga helayso taageero dheeraad ah oo ka badan tii maamulka Bush siinayay ayaan waynayn.
Lama oga isbeddelada ka dhici doona Soomaaliya iyo cidda qabsandoonta magaalada Muqdisho haddii ay Itoobiyaanku ka baxaan, sidaasoo kalena ay ciidamada Afrikaanka ee halkaas ku sugani ay waayaan awood ay iskaga difaacaan kooxaha ka soo horjeeda joogitaankooda.
Waxa iyadana aan la ogay saamaynta ay ku yeelandooto Somaliland oo weeraro argaggixiso ah oo lagu soo qaaday sannadihii ugu dambeeyay ay soo qorsheeyeen kooxaha ku sugan dalka Soomaaliya. Mowqifka ku aaddan madaxbannaanida Somaliland ee ay qabeen maamullada kala dambeeyay ee marba gacanta sare lahaa Soomaaliya ayaa guud ahaan isku mid ahaa, iyaga oo dhamaantood ku andacoonaya in Somaliland ka mid tahay Soomaaliya ayna hoos timaaddo maamulkooda. Lama filayo maamul kale oo halkaas ka dhashaa inuu beddeli doono hanjabaadda iyo hadalada colaaddu ku dheehantahay ee looga bartay.